Cote d'Ivoire inosimbisa yekutanga Ebola kesi mumakore makumi maviri nemashanu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Cote d'Ivoire Kupwanya Nhau » Cote d'Ivoire inosimbisa yekutanga Ebola kesi mumakore makumi maviri nemashanu
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Cote d'Ivoire Kupwanya Nhau • Health News • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Zviri zvekunetsekana zvikuru kuti kuputika uku kwaziviswa muAbidjan, guta revanhu vanopfuura mamirioni mana.
Murwere akasvika achibva kuGuinea akarariswa muchipatara muguta guru reAbidjan.
Munhu ari muchipatara aive afamba kuenda kuCote d'Ivoire nemugwagwa uye akasvika muAbidjan musi wa12 Nyamavhuvhu.
Murwere akagamuchirwa muchipatara mushure mekurwara nefivha uye parizvino ari kurapwa.
Cote d'Ivoire nyika hofisi ye WHO yakaburitsa chirevo ichiti hutachiona hweEbola hwakawanikwa mumasampuli akaunganidzwa kubva kumurwere aive muchipatara muguta rekutengesa reAbidjan, asvika achibva kuGuinea.
Pakutanga kuferefeta kwakawana kuti murwere anga aenda Cote d'lvoire nemugwagwa uye wakasvika muAbidjan musi wa12 Nyamavhuvhu. Murwere akagamuchirwa muchipatara mushure mekurwara nefivha uye parizvino ari kurapwa.
Pakutanga kwegore rino, Guinea yakasangana nekuputika kwemwedzi mina yeEbola, iyo yakaziviswa kuti ichapera musi wa 19 Chikumi 2021. WHO yakati pari zvino hapana chinoratidza kuti nyaya iriko muCote d'Ivoire yakabatana nekupararira kweGuinea, asi akawedzera kuti kumwe kuferefeta kucharatidza kusanzwisisika, uye kuona kana paine hukama pakati pekuputika uku kuviri.
Gore rino kuputika kweEbola kwakaziviswa muDemocratic Republic of the Congo neGuinea, asi inguva yekutanga kuputika kwakaitika muguta guru rakadai seAbidjan kubva pakaparuka West Ebola ya2014–2016.
"Zviri kunetsa zvikuru kuti kuputika uku kwaziviswa muAbidjan, guta rine vanhu vanopfuura mamirioni mana," akadaro Dr Matshidiso Moeti, World Health Organisation (WHO) Regional Director we Africa. "Zvisinei, hunyanzvi hwakawanda hwepasi rose hwekurwisa Ebola huri pano mukondinendi uye Cote d'Ivoire inogona kutora chiitiko ichi uye kuunza mhinduro kumhanya kuzere. Nyika iyi ndeimwe yenyika nhanhatu dzakatsigirwa neWB munguva pfupi yapfuura kuti dziwedzere kugadzirira kweEbola uye kuongororwa kwechimbichimbi kunoratidza kugadzirira kuri kubhadhara. ”